यस्तो बन्यो एनआरएनए अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसीको प्यानल – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ यस्तो बन्यो एनआरएनए अध्यक्षका प्रत्यासी डा. केसीको प्यानल
दीप संञ्चार असोज १२, २०७८ गते २०:५२ मा प्रकाशित
गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षका प्रत्यासी डा. बद्री केसीले आफ्नो प्यानलको टुंगो लगाएका छन् । रुस निवासी व्यवसायीसमेत रहेका वर्तमान उपाध्यक्ष डा। केसी प्यानलसहित चुनावी मैदानमा उत्रिने भएका हुन् ।
डा .केसी प्यानलबाट छ जना उपाध्यक्ष (एक महिला र एक युवा अनिवार्य) उम्मेदवारको टुंगो लागेको बताइएको छ ।
अमेरिकी क्षेत्रबाट महासचिवमा गौरीराज जोशीलाई अघि सार्ने तयारी डा। केसी प्यानलको छ । जोशी वर्तमान कार्यसमितिका सचिवसमेत हुन् ।
यस्तै, महिला संयोजकमा संगीता मरहठ्ठा (यूके) र युवा संयोजकमा मिलन छन्त्याल (आयरल्याण्ड)ले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । क्षेत्रीय संयोजक तथा उपसंयोजकका उम्मेदवारबारे पछि निर्णय गर्ने डा। केसीको सचिवालयले जनाएको छ ।
आगामी २३(२५ अक्टोबरमा काठमाडौंमा हुने दशौँ विश्व सम्मेलनले संघको नयाँ नेतृत्व चुन्नेछ । नेतृत्वका लागि बेलायतका व्यवसायी कुल आचार्य र अमेरिकाबाट रविना थापाले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् ।